Waxaan Joojiyay Boggeygii Qaaliga ahaa ee Warbixinta iyo Falanqaynta Diib | Martech Zone
Dakhliga lumay ee laxiriira COVID-19, runti waxay ahayd inaan dib-u-qiimeeyo badeecooyinka aan u adeegsanayay baaritaanka, kormeerka, warbixinta, iyo hagaajinta boggaga iyo kuwa macaamiishayda. Waxaan ku bixinayay dhowr boqol oo doolar bishiiba qalab aad u yar oo aan tan ku sameeyo. Sidoo kale, mid kasta oo ka mid ah aaladahaas wuxuu lahaa tanno warbixinno iyo xulashooyin ah - laakiin waa inaan ku shanleeyo xogta si aan u helo talo-bixin ficil ah oo aan u isticmaali karo si aan ugu hagaajiyo goobaha.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan bixin jiray tan lacag ah… runtiina ma helin jawaabihii aan u baahnaa. Hore ayaan tan ugu kaftamay… in aaladaha gorfaynta ay runtii yihiin uun su'aal matoorada oo aan jawaab matoorada. Adiga ayay u tahay adiga falanqeeyaha inaad aqoonsato oo aad mudnaanta siiso fursadaha ka dib markaad qodato xogta, qaybta, shaandhaynta, iyo isbarbardhiga habdhaqanka booqdaha.
Waxaan rabaa in aan cadeeyo sida aan u tilmaamayo sheygan aan helay - diid. Waxaa jira macno ahaan kumanaan waxyaalood oo aad ku sameyn kartid degel si loo hagaajiyo aragtida, koritaanka, iyo beddelaadda. Falanqaynta qaarkood waxay had iyo jeer u baahan tahay qof inuu u turjumo xogta ficillada.
Diib: Mashiinka Jawaabta
Fiidiyowgaan waxaa ka diid markay bilaabeen 5 sano ka hor waxay siinayaan xoogaa aragti ah barxadda iyo sida ay u caawin karto ganacsigaaga:
Waxaan iska diiwaan galiyay bilaash diid koontada isla markiibana la dhacsanayd fikradaha caqliga leh ee madalku horay u bixinaysay daqiiqado gudahood markii la saxiixayay. diid wuxuu ku bilaabmaa iyadoo la falanqeynayo boggaaga oo la aqoonsado fursadaha ugu weyn ee lagu kobcin karo iibkaaga. Diib wuxuu u kala baxaa afar xal oo waaweyn:
Mashiinka Jawaabta - aalad ogaanshaha cudurka oo awood badan ayaa baari doonta bartaada waxayna la imaan doontaa qorshe koritaan habaysan adiga oo si fudud kuu siinaya jawaabaha.
Analytics - diid kaliya ma cabbirayaan xogta, waxay u beddelaan qiime doollar oo dhab ah meheraddaadii hore, hadda, iyo mustaqbalka. Waxa kale oo aad arki kartaa sida aad isugu ururiso meheraddaada.
Horumar Socodka - La soco dhammaan dadaalkaaga iyo barashadaada si aad u aragto intaad ka timid! Hadba horumarka aad aragto, ayaa inbadan oo aad sii socon doonto!
Barashada Maktabadda - Haddii aad tahay qof wax iibiya oo is-samee, Diib sidoo kale wuxuu leeyahay talooyin, qalab, iyo casharro ku saabsan farahaaga. Waxay leeyihiin maktabad weyn oo ka kooban 1000s fiidiyowyo, maqaallo, waraaqo cad, iyo ebook.
Diib waxay kuu soo gudbineysaa falanqeyn fudud, saameyn-sarre leh, warbixin, iyo muuqaallo si ay kuu ogeysiiso sida aad tahay iyo waxa xiga ee la sameynayo. Iyada oo loo yaqaan 'diib ™ waxaad ogtahay qiimaha sanadlaha ah ee bartaada iyo sida wanaagsan ee ay ganacsigaagu uga shaqeynayo khadka tooska ah ee warshadahaaga. Diib wuxuu u abuuraa qorshe koritaan caadiya ganacsigaaga joogitaankiisa internetka.
Hubi Caafimaadka Websaydhkaaga
Warbixinta udub dhexaadka u ah warbixinta waa xaqiijinta bilowga ah ee shabakadaadu runti caafimaad tahay. Diib tan waxay ku sameysaa iyadoo la falanqeynayo astaamahan muhiimka ah ee bog caafimaad qaba:
Shahaadada SSL: Waxaa laga yaabaa inaadan haysan goob aamin ah ama shahaadadaada SSL aan si sax ah u rakibnayn. DiibMashiinka iskaanka ayaa aad u xulo marka ay timaado amniga wuuna ku soo ogeysiinayaa hadii ay arkaan qaladaad muhiim u ah oo saameyn ku yeelan kara darajooyinkaaga ama sababi kara feejignaan biraawsarka booqdaha.
Xawaaraha Mobilada: Mashiinka Jawaabku wuxuu hubiyaa xawaaraha mobilkaaga maalin kasta. Haddii ay jirto arrin ku saabsan xawaarahaaga moobiilka, ka Diib ayaa kuu digi doona.
Maamulka Domain / Backlinks: Astaamahan ayaa kuu sheegaya maamulkaaga hadda jira ee Moz Domain iyo tirada badan ee backlinks ee tilmaamaya boggaaga. Waxa kale oo aad arki kartaa liistada xiriiriyeyaashaada ugu muhiimsan.
Facebook / Google Nidaamkayga Ganacsi: haddii aadan isku dhejin labadan ilood ee xogta muhiimka ah, Diib ayaa kula socodsiin doonta si aadan u seegin ujeeddooyinka muhiimka ah iyo digniinta!
Mareegtada: Baadhitaankani wuxuu kuu sheegayaa haddii aan ogaanay khariidadda boggaaga iyo haddii kale. Khariidadaha bogga ayaa ka caawiya Google iyo makiinadaha kale ee wax raadinta gurguurta boggaaga.
Keywords: Tani waxay kuu sheegaysaa inta eray ee muhiimka ah ee boggaagu ku muujiyey google. Waxaad arki kartaa illaa 150 ka mid ah ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah.
Liiska madow: Kani waa degel iyo baar cinwaanka IP-ga oo kuu sheegaya in emaylladaada loo keenayo sanduuqyada macaamiishaada iyo in kale. Haddii diid ogaadaa in emaylladaadu ay u badan tahay inay ku dhacayaan sanduuqyada spam halkii sanduuqyada ay ku soo ogeysiin doonaan sidoo kalena kaa caawin doona inaad saxdo dhibaatada.
Ujeeddooyinka Raadinta, Bulshada, Moobilka, iyo Deegaanka
Markii aan aasaasay degelkayga, diid wuxuu ku xirnaa Google Analytics, Google Business, iyo Facebook si ay u bixiyaan raadinta, bulshada, moobiilka, iyo fikradaha ganacsiga maxalliga ah. Barxadku wuxuu isla markiiba gartay ujeeddooyinka qaarkood inaan aniga dib u eego oo ay weheliyaan xiriiro waaweyn si aan u barto sida:
Diib falanqeeyay fikradaha Facebook si loo ogaado goorma maqaaladaydu saamaynta ugu badan yeelan doonaan.
Diib lahaa xoogaa sirdoon ah oo i tusay in COVID-19 uusan saameyn ku yeelanaynin taraafikada guud ee websaydhka.
Diib aqoonsaday qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha gudaha ka jabay si aan u saxo.
Diib aqoonsaday backlinks qaar ka mid ah oo sun u noqon kara oo aan jeclaan lahaa inaan diido.
Diib waa Qiimo Gaarka ah
Nadiifiyayaashu waxay oran doonaan aaladaha sidan oo kale ah kuma filna. Taasi waxay u badan tahay inay run tahay meelaha waaweyn, ee adag ee warshadaha aadka u tartamaya. Laakiin ganacsiyada intooda badani kama shaqeeyaan meeshii ay u baahnaayeen inay ka eegaan dhinac kasta oo ka mid ah joogitaankooda internetka ... waxay ku mashquulsan yihiin socodsiinta ganacsigooda.
Qiimaha magacaaban ee diid, Qiimaha ayaa aad uga culus inta badan meelaha laga helo. Waa kormeer caafimaad, qiimeyn, saadaalin, ujeeddooyin, iyo digniino ayaa celcelis ahaan milkiilaha bogga ku mashquulinaya inta lagu jiro sannad si loo hagaajiyo kobaca websaydhkooda iyo koritaanka ganacsigooda.
Xisaab diib bilaash ah ayaa bixisa:
Qorshaha Kobaca Xaddidan - Helitaanka xaddidan ee digniinta maalinlaha ah iyo ujeeddooyinka ku tusaya sida ugu dhakhsaha badan ee loo kobciyo taraafikada & dakhliga.
Korjoogteynta Websaydhka - U hel digniino dhibcaha taraafikada ee aan caadiga ahayn, jaban ama spammy backlinks, arrimaha waxqabadka, amniga, ama xitaa cusbooneysiinta algorithms raadinta Google! Digniin kastaa waxay ka kooban tahay talaabooyin la qaadi karo oo lagu xallinayo arrinta.
Email-ka Sawirka Toddobaadka ah - Ka war hel fursadaha koritaanka iyo arrimaha iman kara.
Dhibcaha Caafimaadka Maalinlaha - algorithm smart diib wuxuu u kuur galayaa xaalada boggaaga waqtiga dhabta ah.
Tijaabinta - isbarbardhigga waxqabadka boggaaga iyo bogagga la midka ah ee ku jira warshadahaaga.
Xisaabta Diib Pro waxay ku kacaysaa $ 19.99 - $ 29.99 / bishii iyadoo kuxiran taraafikada websaydhka waxayna ku siisaa wax walba akoonka bilaashka ah, iyo sidoo kale:
Qorshaha Kobaca - Helitaanka buuxa ee digniinta & ujeeddooyinka maalinlaha ah ee ku tusaya sida ugu dhakhsaha badan ee loo kobciyo taraafikada iyo dakhliga.
Ilaa 30 degel - Eeg sida boggaga internetka oo dhan ay u socdaan hal shaashad.
Caawinaad xirfadle ah wakhti kasta - Helitaanka 24/7 oo bilaash ah khabiir ku takhasusay koritaanka.
warbaahinta bulshada - diib wuxuu kormeeraa waxqabadkaaga dhabta ah wuxuuna ku siinayaa khariidad-hawleed caadiya oo lagu kobciyo kanaalkan aadka muhiimka u ah.
SEO & ereyada muhiimka ah - Falanqaynta iyo soo-jeedinta hagaajinta ee ku saleysan qiimaha Moz & Xeebaha xogta.
Hubi Caafimaadka Websaydhkaaga Hadda!
Shaacinta: Waxaan ku faraxsanahay isku xirnaan diid.
Tags: engine jawaabCOVID-19diidgorfaynta googleAnalytics googlegoogle ganacsigeygaliiska madowfalanqaynta moobiilkaxawaaraha mobiladaraadinta falanqayntafalanqaynta bulshadasslkormeerka boggadejinta shabakadda